Bit By Bit - နိဒါန်း - 1.5 စာအုပ်၏ကောက်ကြောင်း
ဤစာအုပ်လေးကျယ်ပြန့်သုတေသနလုပ်ငန်းအားဖြင့်တစ်တိုးတက်မှုပတ်ပတ်လည်စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ချဉ်းကပ်: အပြုအမူလေ့လာမေးခွန်းတွေမေး, စမ်းသပ်ချက်အပြေးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းဖန်တီးခြင်း။ ဤရွေ့ကားလေးချဉ်းကပ်မှုအားလုံးအနှစ် 50 ကလွန်ခဲ့တဲ့အချို့သော form မှာအသုံးပြုတဲ့, ငါသလူအပေါင်းတို့သည်ယခုမှအချို့သောပုံစံကိုအနှစ် 50 အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချတယ်ခဲ့ကြသည်။ ငါအသီးအသီးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအခနျးတှငျအပျနှံပြီးပြီ။ ထိုအခန်းကြီးထဲကအတော်များများဟာစာသင်ခန်းထဲမှာသို့မဟုတ် Self-လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ထပ်မံမှတ်ချက်ပြုမှမြှုပ်နှံမယ့်အပိုင်း, တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာနောကျဆကျတှဲ, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ သောကြောင့်ဤအင်္ဂါရပ်များ, ငါတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့အဓိကစာသားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မယ်; သင်စာပေသို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ယင်းတို့ထဲမှချင်ပါတယ်လျှင်သင်အခန်းကြီးဤအခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
အခန်း2(လေ့လာခြင်းအပြုအမူ) ၌ငါသည်သုတေသီများလူတွေရဲ့အပြုအမူကိုလေ့လာခြင်းမှလေ့လာသင်ယူနိုင်သလဲဆိုတာနှင့်မည်သို့ဖော်ပြပါမည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်မဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စဒေတာများနှင့်သုတေသီထိုအချက်အလက်များ၏ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိအခန်းကဏ္ဍခဲ့ဘယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဒေတာကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအချက်အလက်များ၏ဒီလိုမျိုး၏ဘုံအင်္ဂါရပ်တွေကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မယ်, ငါကိုအောင်မြင်စွာလေ့လာအပြုအမူကနေသင်ယူဖို့အသုံးပွုနိုငျသောသူအချို့သုတေသနလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
အခန်း3ခုနှစ်တွင် (မေးခွန်းများကိုမေး), ငါသုတေသီများအပြုအမူလေ့လာကျော်လွန်ရွေ့လျားနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူနှင့်လူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့စတင်နိုင်ပါသည်အဘယျသို့ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်မစစ်တမ်းသုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ကိုအလှနျတနျဖိုးပင်ပြီးသားရှိပြီးသားဒီဂျစ်တယ်ဒေတာနှင့်အတူရှိနေသည်တစ်ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျရှိကြောင်းငြင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါရိုးရာစုစုပေါင်းစစ်တမ်းအမှားမူဘောင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စစ်တမ်းသုတေသနအတွက်နေိုငျသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစုစည်းဖို့ကအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်, ငါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်နမူနာကောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စဒေတာနှင့်အတူစစ်တမ်းဒေတာပေါင်းစပ်ပြီးနှစ်ခုမဟာဗျူဟာကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောစစ်တမ်းသုတေသီများလက်ရှိခံစားမိကြောင်းအဆိုးမြင်နေသော်လည်းငါဒီဂျစ်တယ်ခေတ်စစ်တမ်းသုတေသန၏ရွှေအသက်အရွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။
အခနျးကွီး4ခုနှစ်တွင် (စမ်းသပ်ချက် Running), ငါသူတို့အပြုအမူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းများမေး ကျော်လွန်. ရွှေ့လာသောအခါသုတေသီများလေ့လာသင်ယူနိုင်သလဲဆိုတာဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်စမ်းသပ်ချက်-ရှိရာသုတေသီကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သုတေသီများဟာအလွန်တိကျတဲ့-enable လမ်းအတွက်ကိုကမ္ဘာ့ intervenes ထိန်းချုပ်ထားသော randomized ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်။ ငါငါတို့သည်ယခုပွုနိုငျကွောငျးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်လုပ်နိုင်တာစမ်းသပ်ချက်များ၏မျိုးနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်းနောက်ခံနဲ့အတူငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ပို့ချဘို့နှစ်ခုအဓိကမဟာဗျူဟာမှာပါဝင်နေတဲ့ trade-off ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်တို့ကိုငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်၏အစစ်အမှန်အာဏာအားသာချက်ယူနှင့်တန်ခိုးနှင့်ကြွလာသည်ဟုတာဝန်အချို့ကိုဖော်ပြရန်နိုငျပုံနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျနှင့်အတူကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
အခန်း5ခုနှစ်တွင် (အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating), ငါသုတေသီများလူမှုရေးသုတသေနပွုနိုင်ရန်အတွက်သိပ္ပံပညာ-အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု-ထိုကဲ့သို့သော crowdsourcing နှင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြပါလိမ့်မယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းကိုသုံးသူအသုတေသီများဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်အကြောင်း, ဒုတိယအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကိုညွှန်ပြလိုက်ခြင်းနိုင်, ပထမဦးဆုံးနှင့်: အောင်မြင်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းများဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်အနည်းငယ် key ကိုစည်းရုံးရေးအခြေခံမူပေးအသုံးပြုပုံငါနှစ်ဦးအရာများကိုသင်တို့အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်မျှော်လင့် ယခင်ကမဖြစ်နိုင်သလိုပဲခဲ့ကွောငျးပြဿနာတွေ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းမကြာခဏပိုက်ဆံကယ်ဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ရာထူးတိုးပေမဲ့, ကထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ mass ပူးပေါင်းမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုစျေးနှုန်းချိုသာသုတသေနပွုဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းသုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အခန်း6(Ethics) ၌ငါသည်သုတေသီများလျှင်မြန်စွာသင်တန်းသားများကိုကျော်အာဏာကိုတိုးမြှင့်, ထိုစွမ်းရည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်း, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဥပဒေများထက်ပိုမြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြီငြင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီပေါင်းစပ်-တိုးမြှင့်တန်ခိုးနှင့်အာဏာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာသုတေသီများကောင်းကောင်းအဓိပ္ပာယ်-အရွက်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မရှိခြင်း။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ငါသုတေသီများဟာအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်ချမှတ်သင့်ကြောင်းငြင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, သုတေသီများလက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ-သောပေးထား-နှင့်ပိုပြီးယေဘုယျကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူအားဖြင့်သကဲ့သို့ငါယူလိမ့်မည်မှတဆင့်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ လေးထူထောင်အခြေခံမူနှင့်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလမ်းပြကူညီပေးနိုင်ပါသည်နှစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်အဆိုပြုပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါအနာဂတ်၌သုတေသီများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိမ့်မည်, ငါမတည်မငြိမ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်ဘို့လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားကြောင်းအချို့တိကျတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖော်ပြရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျအခနျး7(အနာဂတ်) ၌ငါသည်အခန်းကြီးအနှံ့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသုံး themes များ summarize မည်ဖြစ်ပြီးသောအနာဂတ်ကာလ၌အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ဆိုရှယ်သုတေသနလုပ်ငန်းကျနော်တို့အနာဂတ်များ၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စွမ်းရည်များနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးသုတေသနဆိုင်ရာလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ပုံဖော်ကြလိမ့်မည်။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုအထောက်အကူပြုဖို့တစ်ခုခုရှိပြီး, အသီးအသီးအုပ်စုသင်ယူဖို့တစ်ခုခုရှိတယ်။